जुम्ल्याहा आमाद्वारा एकै समयमा एकै अनुहारका सन्तानको जन्म ! - लोकसंवाद
जुम्ल्याहा आमाद्वारा एकै समयमा एकै अनुहारका सन्तानको जन्म !
काठमाडौँ, एजेन्सी । अमेरिकामा २६ वर्ष पहिले जन्मिएका जुम्ल्याहा नर्सले आफू जन्मिएको एथेन्स स्थित अस्पतालमै एकै समयमा बच्चा जन्माएकी छन् ।
जुम्ल्याहा मध्येकी एक टोरी ड्रिंकार्ड सेप्टेम्बर २५ को दिउँसो १२ः४५ मा बच्ची ऐडिसनलाई जन्म दिएकी थिइन् । त्यस्तै टेरा हवार्डले पनि १२ः४५ बजे नै एम्मा विलियिम्सलाई जन्म दिइन् । दुवै बच्चाको अनुहार दुरुस्तै रहेको छ । यस्तो मामिला २५० जुम्ल्याहामा एक हुने गर्छ । जब दुवै जुम्ल्याहाको बच्चा पनि जुम्ल्याहा नै हुने गर्छ ।
टोरी तथा टेरा यसै हप्ता अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । दुवैको सिजेरियन डेलीभरी भएको हो । टोरीले भनिन्, आफ्नो बहिनीसँगै बच्चा जन्माउन म एकदमै आतुर थिएँ । तर, मेरो दिमागमा यो कहिल्यै आएन कि हामी जस्तै हाम्रो बच्चा पनि जुम्ल्याहा नै हुन्छ ।
जुम्ल्याहा आमाहरु स्वयं एक मिनटको अन्तरमा जन्मिएका थिए ।